*Indawo entle kwindawo edlamkileyo, izinyuko zokuya kwi-t506
UCindy unezimvo eziyi-3183 zezinye iindawo.
Ubuncinci ubusuku obungama-28 obuhlala kuphela. Nceda ucofe "olunye uphononongo" phantsi kwecandelo lophononongo ukuze ubone ngaphezulu kwe-3000 yophononongo lwesi sakhiwo.
Embindini weAllston, kanye kwisikhululo saseGreenline-B iPackard's Corner, istudiyo sethu sifanelekile kubakhenkethi, abahambi ngezoshishino kunye nabafundi abandwendwelayo. Indlu ine-AC, iheater, iSmart TV, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, iilinen zebhedi ezikhethwe ngabasebenzi kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko umntu aya kuzifuna ngexesha lohambo.
Uluhlu olufutshane lwezinto eziqukwayo kwiflethi luboniswe ngezantsi. Sibonelela ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale ngokukhululekileyo kunye noncedo lwabasebenzi kwindawo 24/7.
Ukunyaniseka ngaphambili: Umfoti wakwa-Airbnb unobuchule kakhulu, ifulethi lokwenyani lincinci kunelo livela kwifoto. Kwaye igumbi lokuhlambela liphelelwe lixesha kwaye lincinci. Ifulethi eliphambi kwendlela engaphantsi, nceda ulindele ingxolo yesixeko kwaye ucinge ngokuvala ifestile yonke indlela ukuya ngasekunene xa uphumle ebusuku. Nangona kunjalo, ifulethi ngokuqinisekileyo lixabiso elifanelekileyo lemali ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye i-airbnb kunye nehotele.
-Imizuzu emi-2 yokuhamba ukuya kwizithuthi zikawonke-wonke, kwi-subway kunye nebhasi. Zama isithuthuthu ukuba uceba ukuhlola idolophu yaseBrookline! Khwela ngolonwabo!
- Icocwe ngokugqibeleleyo ziingcali
- Ikhitshi enempahla elula
-Amashiti amatsha, iitawuli, ishampu, iconditioner, i-make-up remover, iingcebiso
-Izandla zohlobo lomamkeli, oluhlala lukhona xa lufuneka.
-Nantoni na eyenye efunekayo cela nje kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba siyifumane.
- Iibhedi ezi-2 ezigcweleyo, indawo yokutyela enezitulo ezibini
- umenzi wekofu kunye namanzi ebhotile ancomekayo
Njengomncinci, uvukelo kunye nenxalenye ye-Greater Boston, idolophu yaseAllston imida yeFenway/Kenmore kunye neBrighton, kunye neSixeko saseBrookline, ikhaya likaJohn F. Kennedy.Ibonelela ngokufikelela ngokulula kwiNdlela yesi-2, i-Mass Pike, i-Storrow Drive, kunye ne-Solders Field Road, ekhokelela kwiindawo ezininzi e-Greater Boston.
Izimvo eziyi-3 185
Ngenxa yobhubhane, siyayimisa inkonzo yethu kwindawo de kube siphinde saziswa, kodwa sinabasebenzi abafowunelwayo abasoloko befumaneka ukuze bafumane uncedo. Buza nje ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye nantoni na oyifunayo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3216